Tuesday February 20, 2018 - 10:55:44 in Wararka
Maxamed Al-Suhaimi ayaa fikirkan jeediyey xili uu u waramayay telefishen afcarbeedka ku hadla oo isaga waraysanayay
Waxaad moodda in waxyaabo badan oo dhaqan ka ahaa dalka Sacuudiga ay sii baaba’ayaan iyadoo ninka la warreegay awoodda dalkaasi ee dhaxalsugaha ah ee Amiir Maxamed uu isku dayayo in Sacuudiga u wax badan ka badelo.
Balse aadaanka saaladda oo la dhaleeceeyo waa mid aan la dhageysan karin oo aad loola yaabo, Mohammed al-Suhaimi ayaa ah qoraa lagu yaqaano fikrado furfuran.
Qoraaga waxa uu sheegay in samaacadaha dhaadheer ee aadaanka misaajidyada aad moodo tartartan u dhaxeeya ayna tahay arin dhibaysa nolosha dadka qaasatan caruurta.
Balse hadalka ninkan ka soo yeeray ayaa dhalin kara tilaabo sharci ah oo laga qaado.
Dad badan ayaana hadalkiisa aad uga carooday waxaana baraha bulshada la soo dhigay isagoo jawaab looga dhigayo muuqaalo muujinaya wiilal yar oo salaadaha misaajida ku biiraya.
Mid ka mid ah muuqaladana waxuu muujinayaa ilmo yar oo isagoo ciyaaraya hadana maqlay aadaanka oo aamusay isagoo xurmaynaya aadaanka.